Football Khabar » यस्ता छन् च्याम्पियन्स लिग जित्ने मेस्सीका तीन योजना
यस्ता छन् च्याम्पियन्स लिग जित्ने मेस्सीका तीन योजना
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले सन् २०१५ मा ट्रिबेल उपाधि जित्दा च्याम्पियन्स लिग जितेयता पुनः सो प्रतियोगिताको फाइनल पुग्न सकेको छैन । ऊ पछिल्ला चार सिजन लगातार प्रतियोगिताको फाइनल नपुगी आउट हुँदै आएको छ । पछिल्ला दुई सिजन त ऊ लज्जास्पद हार व्यहोर्दै प्रतियोगिताबाट आउट भयो ।
जारी सिजन बार्सिलोना जसरी पनि क्लबमा ‘युरोपियन उपाधिको शान’ फर्काउने अभियानमा छ । तर, उसको बाटो सहज छैन । किनभने, उसले उपाधि होमडमा युरोपकै उत्कृष्ट टिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । बार्सिलोनालाई गत सिजन इंग्लिस क्लब लिभरपुलसँग सेभिफाइनलमा भोगेको ४–० को हारको पीडा आलै छ ।
जारी सिजन बार्सिलोना समूह विजेता बनेर अन्तिम १६ मा पुगेको छ । अब नकआउट चरणमा उसले इंग्लिस क्लब टोटनह्याम, चेल्सी, इटालियन नापोलीमधये कुनै टिम प्रतिस्पर्धी पाउन सक्छ ।
यो सिजन बार्सिलोनाले कसरी च्याम्पियन्स लिगको यात्रा गर्दैछ ? वा, कसरी उपाधि जित्न सक्छ ? यसबारे कप्तान मेस्सीले बार्सिलोना निकट मानिने पत्रिका ‘मुन्डो डेपोर्टिभो’सँगको ताजा अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । मेस्सीले यो सिजन तीन कुरालाई प्रमुख ध्यानमा राख्नुपर्ने औंल्याएका छन् ।
पहिलो– मेस्सीले टिम र खेलाडी पछिल्ला दुई सिजन त्यसमा पनि गत सिजनको खराब हारको ‘ह्याङ’बाट बाहिर आउनुपर्ने बताएका छन् । ‘इमान्दारीसाथ भन्नुपर्दा गत सिजन लिभरपुलसँग ४–० को हार हाम्रो दिल र दिमागमा अझै आलै छ । यो निकै पीडादयाी थियो । तर, अब हामी यो सिजन उपाधि जित्न चाहन्छौं भने त्यो खराब नतिजा बिर्सनुपर्छ । हामीले विगतका सबैखाले निराशा बिर्सनुपर्छ । र, नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ,’ मेस्सीले भनेका छन्, ‘नत्र, फेरि पनि हाम्रा पुरानै दोहोरिन सक्छन् । तर, हामी विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्न भने तयार हुनुपर्छ ।’
दोस्रो– मेस्सीले यसपटक च्याम्पियन्स लिगमा अझै कडा प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा टिम थप एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘च्याम्पियन्स लिग हरेक सिजन झन् कठिन बन्दै गइरहेको छ । अहिले एकसे एक टिम उपाधि होडमा छन् । तपाईं कुनै पनि टिमलाई कमजोर आँक्न सक्नुहुन्न । यस्तो बेला कुनै एक वा दुई खेलाडीको बलले टिम अघि बढ्दैन । हरेक खेलाडी र सिंगो टिम एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ । टिमका लागि सबैले आ–आफ्नो भूमिकाबा १०० प्रतिशत दिनुपर्छ ।’
तेस्रो– मेस्सीले अबका दिनमा खेलाडीलाई शारीरिक रूपमा फिट राख्नु अतिआवश्यक रहेको बताए । ‘अब सिजनका कठिन दिन सुरु हुँदैछन् । लिग मध्यभागतिर जाँदैछ भने च्याम्पियन्स लिगमा नकआउट चरण सुरु हुँदैछ । यी दिन निकै दबाबपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छन् । तसर्थ हामीले अबका दिनमा हरेक खेलाडीलाई शारीरिक रूपमा फिट राख्न ध्यान दिनुपर्छ । जब तपाईं शारीरिक रूपमा तयार हुनुहुन्न भने टिमलाई योगदान दिन सक्नुहुन्न ।’
प्रकाशित मिति २६ मंसिर २०७६, बिहीबार १४:३८